SARIPIKA : Nitohy nanerana an’i Venezoela ny hetsi-panoherana · Global Voices teny Malagasy
Mpanoratra Adriana Gutiérrez Nandika (en) i Jen Fumero, Elise Lecamp, Salohy Randriafanomezantsoa
Voadika ny 27 Avrily 2019 6:26 GMT
Vakio amin'ny teny English, Swahili, Français, Español
Fihetsiketsehana tao Valence, any Venezoela, ny 13 Febroary 2014. Sary nalain’i Luis Turinese, zon’ny mpamorona Demotix.
(Marihina fa tamin'ny volana Febroary 2014 n nivoahan'ny lahatsoratra teny Anglisy)
Nitohy tany amin’ireo tanandehibe Venezoeliana maro ny fihetsiketsehana nokarakaraina sy notarihin’ireo mpianatra ny ankamaroany. Nitaky ny famotsorana ireo mpianatra nosamborin’ireo mpitandro ny filaminana Venezoeliana ireo mpanao fihetsiketsehana. Notohanan’ny vondron’olom-pirenena sy ireo mpitarika ny mpanohitra izy ireo, izay nitaky ihany koa ny vahaolana manoloana ireo olana ara-tsosialy sy ara-toekarena marobe miantraika amin’ny mponina.
Nanomboka ny fiandohan’ny volana Febroary (2014), ny renivohitr’ireo fanjakana Andeana sasantsany ao amin’ny firenena no ivombesatry ny hetsi-panoherana ho an’ireo mpianatra izay nitaky ny fiarovana bebe kokoa tao amin’ireo Oniversite tany ampiandohana. Ankoatra izay, nandrisika famoriam-bahoaka an-dalambe ireo mpanao politika tao amin’ny firenena, nantsoina ihany koa hoe #La Salida (ny fivoahana), izay nikendry ny ‘’hampiroborobo ny adihevitra sy ny fifanakalozan-kevitra ary ny fanatrarana ny vahaolana (fivoahana) demaokratika amin’ny olana sasany zay atrehan’ny firenentsika’’.
Ny 12 Febroary (2014), nanapa-kevitra ny hanokana ny andro iray hikarakarana hetsika nasionaly ny tompon’andraikitra ara-politika, izay nahazo ny fanohanan’ny mpianatra sy ny olom-pirenena an’arivony nanerana ny firenena. Nitarika nankany amin’ny fivoaran’ireo fihetsiketseham-bahoaka ny vokatr’ity andro ity. Tanandehibe maro manerana ny firenena no namaly ny antso tamin’ilay fihetsiketsehana, na dia maro tamin’ireo hetsika ireo aza no niteraka fifandonana mahery vaika teo amin’ ny mpitandro ny filaminana sy ny mpanao fihetsiketsehana.
Rakotry ny sary nitatitra ny fihetsiketsehana tany amin’ny faritra tsirairay ny tambajotra sosialy, indrindra fa ny Twitter, izay naka ny toeran’ny fampahalalam-baovao mahazatra tany Venezoela, izay tsy nitantara izany, noho ny fandrahonana nataon’ny governemanta hampadoa azy ireo lamandy raha miresaka momba ny fihetsiketsehana izy ireo.
Nandritra ny alin’ny Alakamisy 13 Febroary (2014), namoaka ny sarin’ny sainam-pirenena nirefy 180 metatra navelatra teo amin’ny lalamben’i Puerto Ordaz tany amin’ny faritra Guayana i @yirli4ny_ :
Izany ka sary!
Naka sary ny hetsika iray nokarakarain’ny mpianatra mpitsabo tao amin’ny Oniversite Afovoany Andrefan’i Lisandro Alvarado izay Oniversite fototra ao amin’ity faritra ity ilay mpanao gazety Mariàngela Gonzalez ao Barquisimeto, tao amin’ny fanjakan’i Lara :
Ry vahoaka: Henoy, mandraisa anjara amin'ny tolona amin'ny 5:08 hariva ny 13 Febroary
Nanambara i Gabriel Bastidas , ao Barcelone, ao amin’ny fanjakan’ny Anzoàtegui, fa nampikatso ny sasany tamin’ireo lalambe fototra tao an- tanandehibe tamin’ny fiandohan’ny tolakandro ny Zoma 14 Febroary 2014 ny fihetsiketsehan’ireo mpianatra :
3:08 hariva, nanao fihetsiketsehana tamin’ny alalan’ny famoronana soratra hoe SOS ireo mpianatra. Nihitsoka ny lalambe mampitohy ny kaominina.
Ao Maracay, renivohitry ny fanjakan’i Aragua, nampahafantatra antsika ny antso izay niparitaka hatramin’ny alina tao amin’ity tanàndehibe ity i Mare :
Ho an’ny firaisankina : mama, dada, ampio ny zanakareo amin’io tolona io. 7:07 hariva
Mbola tena navitrika ihany koa ireo tanora Venezoeliana tao Valencia, tao amin’ny fanjakan’i Carabobo, araka ny voalazan’i Angel Morales :
Ireo mpianatra ao amin’ny Lalambe Bolivar nandeha nankany amin’ny Kianja Bolivar
Nangataka fifampiresahana tamin’ireo manamboninahitry ny polisy izay tonga tao amin’ny kianja ireo mpianatra teo ampanaovana hetsika, araka ny sary navoakan’i José Meza (@josegremeza) , tao Maracaibo :
Nampiseho fihetsika tafahoatra teo amin’ny Kianjan’ny Repoblika ny polisy, ka nanery azy ireo hiresaka ireo tanora. Tamin’ny 5 ora hariva.
Anisan’ny antony nahatonga ireo hetsika ireo ny herisetra sy ny tsy fandriampahalemana, izay nahafatesana Venezoeliana an’arivony. Naseho tamin’ny alalan’ireo sorabaventy maro tao Mérida izany araka ny nasehon’ny sarin’i Sonia Camacho :
Sora-baventy mampihetsi-po ! [ Soratra eo amin’ilay afisy : ‘’Miady ho an’ny hoavin’ny zanak'anabaviko aho, nalain’ireo mpamono olona ao Venezoela ankeriny ny rainy’’.
Ary mbola nitohy ihany ny fifandonana teo amin’ireo mpianatra sy ny mpitandro ny filaminana nasionalin’ny Venezoela tao San Cristobal, renivohitry ny fanjakana Tachira. Ankoatra izany, nivoaka ny tranony ireo mponina tao amin’ity tanandehibe ity mba hanohana ny fihetsiketsehin’ireo mpianatra izay natao tao amin’ny foiben-toeran’ny Oniversitem-panjakana ao Tachira (UNET). Nisaotra azy ireo i Zuleik Meneses tamin’izany :
Misaotra an’ireo olom-pirenena tamin’ny fanohanany ny UNET.
Farany, nitatitra ny fihetsiketsehana tamin’ny famoahana tsy tapaka ny lisitr’ireo mpanao fihetsiketsehana nosamborina tany amin’ny faritra samihafa tao amin’ny firenena ny El Periodista Cívico (Ny gazety mampianatra ny fahaiza-miaina).
Nandika (fr) i Elise Lecamp